China Cordless Impact utsalo Ukwenziwa kunye Factory | Feihu
Isitshixo seFihu esingenantambo sisixhobo samandla esisetyenziselwa ukukhulula okanye ukuqinisa amantongomane emigca, iibholiti ezinkulu, kunye nezinto zokubopha ezinqabileyo okanye ezinomhlwa. Inika i-torque ephezulu kakhulu yokujikeleza engenakunikwa ngumqhubi wamandla oqhelekileyo. Ingasetyenziselwa ngokubanzi kumashishini amaninzi, njengokulungiswa kweemoto, ukugcinwa kwezixhobo ezinzima, ukuhlanganiswa kwemveliso, iiprojekthi ezinkulu zokwakha, kunye nayiphi na imeko apho kufuneka i-torque ephezulu.
I-Feihu impembelelo engenazintambo isebenza ngendlela yangaphakathi yokubethela amandla e-kinetic kwi-shaft. Oku kulandelayo ziinkcukacha zayo:
Umthombo wamandla: ibhetri ye-lithium
Ukutshaja Ixesha: 2 iiyure
Ukukhawuleza: 0-2000 RPM
I-Max Torque: 320 Nm / 2830 kwii-lbs
Ubungakanani beChuck: 14-28 mm
Packaging: Ibhokisi yeplastiki
I-1.Icompact kwaye inamandla: Exhotyiswe ngemoto enamandla amakhulu, esi sitshixo se-21V sihambisa i-torque enkulu ye-320 Nm kunye nesantya esikhulu se-2000 RPM, ikuvumela ukuba uqinise okanye ukhulule amantongomane ahlukeneyo kunye neebholithi ngokulula.
Isantya esiguqukayo esingaguqukiyo esingu-4: Ngesantya esitshintshayo, ungasilawula ngokulula isantya sokutsala kwakho. Ukuqhubela phambili ukutyhala i-trigger, kokukhona siphezulu isantya sokutsala impembelelo. Nje ukuba ukhulule isixhobo, iya kuyeka kwangoko, iyenze ikhuseleke ngakumbi ngexesha lokusetyenziswa.
Isalathiso se-3.Power kunye nokukhanya kwe-LED: Ibhetri egcwalisekayo ye-21V 2000mAh Li-ion ivumela isixhobo ukuba sisebenze ixesha elide. Isalathi samandla sibonisa ukuba ungakanani amandla asetyenziswayo kwaye sikhumbuza ukuba uhlawule ngexesha. Ngokukhanya kwe-LED, unokusebenza ebumnyameni kwaye ubone indawo yokusebenza ngokucacileyo.
Umsebenzi onzima kunye noyilo lwe-Ergonomic: Ngezinto ezikumgangatho ophezulu zentloko yentsimbi yentsimbi, zibuphucule kakhulu ubomi benkonzo yesi sixhobo. Irabha yokubamba ngaphezulu kwesikhunta kuyilo lwe-ergonomic inikezela intuthuzelo ephezulu kunye nokungcangcazela okuncinci.
I-Feihu intambo engenazintambo, ukhetho olufanelekileyo kuwe, yenza umsebenzi wakho ube lula kwaye ulungele.
Egqithileyo Lithium Umpu waManzi
Okulandelayo: Isikere esingenantambo
Isitshixo se-Impact seCordless Impact
Isitshixo seMpembelelo zombane ongenantambo
Isitshixo seMpembelelo esiNgenantambo
Iintsontelo ezingenantambo zeMpembelelo eziPhezulu
Impembelelo yokutsala ngaphandle kwentambo
Isitshixo seMpembelelo yeNtsebenzo engenaMatshini